Inona avy ireo endri-tsoratra tsara indrindra ho an'ny mailaka? Inona avy ireo mailaka azo antoka amin'ny mailaka? | Martech Zone
Inona avy ireo endri-tsoratra tsara indrindra ho an'ny mailaka? Inona avy ireo mailaka azo antoka amin'ny mailaka?
Alakamisy, Jolay 27, 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Samy efa naheno ny fitarainako momba ny tsy fisian'ny fivoarana amin'ny fanohanana mailaka ianao nandritra ny taona maro ka tsy handany fotoana (be loatra) aho amin'ny fimenomenomana momba izany. Iriko fotsiny ny mpanjifa mailaka (app na browser) iray lehibe, hiala ao anaty fonosana ary hiezaka hanohana feno ireo kinova HTML sy CSS farany. Tsy manana ahiahy aho fa dolara am-polony tapitrisa no lanian'ny orinasa hanatsarana ny mailaka ataon'izy ireo.
Izany no antony mahavariana ny fananana orinasa toa ny Monks Email izay mijanona eo ambonin'ny lafin-javatra rehetra amin'ny famolavolana mailaka. Amin'ity sary farany ity, Typography amin'ny mailaka, ny ekipa dia mitety anao amin'ny alàlan'ny typografika sy ny fomba fametrahana endrits samy hafa sy ny toetrany hanamboarana ny mailakao. 60% ny mpanjifa mailaka izao no manohana endritsoratra fanao namboarina tao amin'ny endrika mailakao ao anatin'izany ny AOL Mail, Native Android Mail App (fa tsy Gmail), Apple Mail, iOS Mail, Outlook 200, Outlook.com, ary mailaka miorina amin'ny Safari.
Misy fianakaviana Font 4 ampiasaina amin'ny mailaka
serif - Ny endritsoratra Serif dia manana litera miroborobo, isa ary endrika amin'ny tendrony kapoka. Izy ireo dia manana fijery ofisialy, endri-tsoratra tsara toerana sy elanelan-tsipika, manatsara be ny famakiana. Endritsoratra malaza indrindra amin'ity sokajy ity dia Times, Georgia ary MS Serif.
Sans Serif - Ny endritsoratra Sans serif dia toy ny karazana mpikomy izay maniry ny hamorona fiheverana ny azy manokana ary noho izany dia tsy manana 'firavaka' mirindra. Manana endrika semi-formal izy ireo izay mampiroborobo ny maha-azo atao mihoatra ny endrika ivelany. Endritsoratra malaza indrindra amin'ity sokajy ity dia Arial, Tahoma, Trebuchet MS, Open Sans, Roboto ary Verdana.
Monogram - Nahazo aingam-panahy avy amin'ny endri-tsoratra fanoratana, ireo endritsoratra ireo dia manana sakana na 'slab' any amin'ny faran'ny tarehintsoratra. Na dia tsy dia ampiasaina amin'ny mailaka HTML aza, ny ankamaroan'ny mailaka tsotra 'fallback' amin'ny mailaka MultiMIME dia mampiasa ireto endritsoratra ireto. Ny famakiana mailaka amin'ireto endritsoratra ireto dia manome fahatsapana fitantanana mifandraika amin'ny antotan-taratasin'ny governemanta. Courier no endri-tsoratra ampiasaina matetika indrindra amin'ity sokajy ity.
Calligraphy - Manahaka ireo litera sora-tanana tamin'ny lasa, ny mampiavaka ireto endritsoratra ireto dia ny fivezivezena mikoriana manaraka ny toetra amam-panahy. Ireo endritsoratra ireo dia tena mahafinaritra ny mamaky amin'ny haino aman-jery azo tsapain-tanana, fa ny famakiana azy ireo amin'ny efijery nomerika dia mety ho sarotra sy mahasosotra tokoa. Ka ny endritsoratra toy izany dia ampiasaina amin'ny lohateny na logo amin'ny endrika sary mijanona.
Ny endritsoratra tsy azo antoka amin'ny mailaka dia misy an'i Arial, Georgia, Helvetica, Lucida, Tahoma, Times, Trebuchet, ary Verdana. Ny endritsoratra manokana dia misy fianakaviana vitsivitsy, ary ho an'ireo mpanjifa tsy manohana azy ireo dia ilaina ny manisy kaody amin'ny endritsoratra fallback. Amin'ity fomba ity, raha tsy zakan'ny mpanjifa ny endritsoratra namboarina, dia hiverina amin'ny endritsoratra afaka zakany izy. Raha mila jerena lalina kokoa dia aza hadino ny mamaky ny lahatsoratr'i Omnisend, Fandefasana mailaka azo antoka vs. Fototra namboarina: ny zavatra tokony ho fantatrao momba azy ireo.
Hamarino tsara fa tsindrio raha te-hifandray amin'ilay infographic ianao.
Tags: AOL Mailpaoma paomaArialcalligraphymailakafonosana mailakamoanina mailakaendritsoratra azo antoka amin'ny mailakaendri-tsoratra mihemotraendri-tsoratra fallbackendritsoratra amin'ny mailakaGeorgiaHelveticaiOS MaillucidamonogramApp Android Native Mail (fa tsy Gmail)Outlook 200Outlook.comMailaka miorina amin'ny Safaritsy manana serifserifTsara feoTahomafotoanaTrebuchetTypographyVerdana
Ny LinkedIn dia mandefa ny demografika amin'ny tranokala Linkedin
Ny Amerikanina rehetra sy ny tale jeneraly Jeremy Bloom dia mifanakalo hevitra momba ny fampidirana
Jul 28, 2017 amin'ny 10: 04 AM
Salama Douglas, lahatsoratra mahatsikaiky sy mahafinaritra vakiana. Manana fanontaniana momba ity “60% -n'ny mpanjifa mailaka ity aho izao dia manohana endritsoratra fanao namboarina tamin'ny volavolanao mailaka”. Misy ve tetik'asa mitohy na teknolojia vaovao ahafahana manakaiky ny 100%?
Jul 28, 2017 amin'ny 10: 06 AM
Wow, iriko! Mihevitra aho fa fitambaran'ireo mpampiasa fotsiny tsy fanavaozana ary koa fenitra ratsy amin'ny mailaka. Mampalahelo ho antsika rehetra!